उत्पादन नहुँदै मकै बिक्रीको चिन्ता «
झापा गाउँपालिका –१ का कुमार गणेश न्यू अन्नपूर्ण कृषि समूहमा आवद्ध छन् । कृषि समूहका २ सय ८० जना कृषकले ४ सय ६५ विगाहमा हाइब्रिड मकै लगाएका छन् । गाउँपालिकामा मकै जोन सञ्चालनमा आएसँगै हाइब्रिड मकै खेतीतर्फ कृषकको आर्कषण बढेको गणेश बताउँछन् । उनले ५ विगाहमा हाइब्रिड मकै खेती गर्दै आएका छन् । खर्च कटाएर प्रति विगाह ६५ हजार रुपैयाँसम्म नाफा निकाल्दै आएका गणेशले गत वर्ष भने मकै बिक्री गर्न ठूलै सकस झेल्नु प-यो ।
“अघिल्ला वर्षहरुमा मकैबाट राम्रै आम्दानी थियो, गत वर्ष भने लागत मूल्य उठाउनै धौधौ प-यो” गणेश भन्छन्, “अघिल्लो वर्ष प्रतिटन ३४ सय रुपैयाँसम्म बिक्री भएको मकै गत वर्ष भने २ हजार प्रतिटनले बिक्री गर्नु प¥यो ।” मकै लगाउँदै कसरी बिक्री गर्ने होला भन्ने त्रास गणेशलाई छ । मकै जोनले यसवर्ष ५० प्रतिशतमा मकैको बीउ उपलब्ध गराए पनि रासायनिक मलको भने अभाव रहेको उनी सुनाउँछन् ।
झापा गाउँपालिकाकै मनोजकुमार गणेश मकै भण्डारण केन्द्र र डायर मेसिन नहुँदा कृषक मारमा पर्ने गरेको बताउँछन् । मकैको बजारीकरणमा समस्या रहेको गणेशले बताए । “मकै भाँच्ने समयमा पर्ने पानीबाट कसरी मकै जोगाउने भन्ने पीर सबैलाई छ” गणेशले भने, “गत वर्ष लामो समयसम्म लगतार परेको पानी र मूल्यमा आएको गिरावटले हामी मारमा परेका हौं ।” गणेशले ४ विगाह क्षेत्रमा ९०८१ जातको मकै लगाएका छन् । उनी विगत ५ वर्षदेखि हाइब्रिड मकैको खेती गर्दै आएका छन् । मकै खरिद गर्ने व्यापारी सीमित रहेको र उनीहरुले नै तोकेको मूल्यमा मकै बेच्नु पर्ने बाध्यता रहेको उनी सुनाउँछन् । “मूल्य दिएर मकै बेच्नु त परकै कुरा, व्यापारीलाई मेरो मकै उठाइदिनु पछि भाउ गरौंला भन्नु पर्ने अवस्था छ ।” मकै जोनले सिँचाइको लागि मोटर, बीउ, र मकै खेती सम्बन्धि स्थलगत कृषक तालिम भने उपलब्ध गराउँदै आएको उनले बताए ।
त्यस्तै, कनकाई नगरपालिका–५ का प्रकाश पाठकले पनि १० विगाहमा ६५९१ जातको हाइब्रिड मकै लगाएका छन् । पाठक आर्दश एग्रो प्राइभेट लिमिटेडमा आवद्ध छन् । लिमिटेड मकै काट्ने मेसिन, सुकाउनका लागि डायर मेसिन खरिद गरेको छ । आर्दश एग्रोले १७ हेक्टरमा मुल मकैको बीउ समेत लगाएको पाठकले बताए । “गत वर्ष भने मकैले उचित मूल्य पाउन सकेन, नेपालमा करोडौंको मकै भारतबाट भित्र्न्छ” पाठक भन्छन्, “नेपालको मकैले भने बजार पाउँदैन, सरकारले मकैको बजारीकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।”
झापाको झापा गाउँपालिकामा मात्र १६ सय विगाहमा हाइब्रिड मकैको व्यावसायिक खेती हुँदै आएको छ । केही वर्ष अघि मकैबाट राम्रो आम्दानी भएसँगै झापामा हाइब्रिड मकैको व्यावसायिक खेती सुरु भएको हो । गाउँपालिकामा सञ्चालित मकै जोन कार्यक्रमले हाइब्रिड मकैको खेतीतर्फ कृषकको आर्कषण बढेको झापा गाउँपालिका कृषि शाखा प्रमुख रिता बर्देवाले बताइन् । “गाउँपालिकाका ७ वटै वडामा मकै जोन सञ्चालनमा छ” बर्देवाले भनिन्, “७ वटै वडामा १६ सय विगाह भन्दा बढी क्षेत्रफलमा हाइब्रिड मकै लगाइएको छ ।” मकै जोन सञ्चालनमा आएपछि उन्नत जातको मकै उत्पादन, समूहमा मकै खेती सुरु भएको बर्देवा बताउँछिन् ।
गत वर्षदेखि झापामा मकै जोन कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्र्तगत सञ्चालित उक्त जोन झापा गाउँपालिका र कनकाई नगरपालिकामा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । गत वर्ष झापा गाउँपालिका–६ र कनकाई नगरपालिका–५ मा गरी ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा मकै जोन सञ्चालन गरिएको थियो । उक्त क्षेत्रलाई विस्तार गरी यस वर्षदेखि झापा गाउँपालिका र कनकाई नगरपालिको ५ र ६ नम्बर वडामा जोन सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
झापा गाउँपालिकामा प्रति विगाह १ सय ५० मनसम्म मकै उत्पादन हुने गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयनारायण साहले बताए ।
यस वर्षदेखि पुरै गाउँपालिकामा मकै जोन लागू भएको अध्यक्ष साह बताउँछन् । “झापाको सबैभन्दा धेरै मकै उत्पादन हुने क्षेत्र झापा गाउँपालिका नै हो” अध्यक्ष साहले भने, “जोन घोषणासँगै कृषक आत्मनिर्भर हुँदै गएका छन् तर, गत वर्ष कोरोना महामारीले गर्दा भने यहाँ उत्पादित मकैले उचित मूल्य पाउन सकेन ।” मकै जोनले किसानको लागत मूल्य घटाउने तथा उत्पादन वृद्धिमा सहयोग गरेको भएपनि बजार भने अभाव रहेको साहले जानकारी दिए । मकै भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्न सके कृषकलाई थप फाइदा हुने अध्यक्ष साह बताउँछन् । झापा गाउँपालिका –६मा ५० विगाह क्षेत्रफलमा मकै खेती हुँदै आएको अध्यक्ष साहले बताए । झापा गाउँपालिकाको प्रत्येक वडामा १ हजार विगाह जमिनमा मकै खेती गर्न सकिने उनले बताए । झापाको कनकाई नगरपालिका र झापा गाउँपालिका मकैको उत्पादनका दृष्टिले उर्बर मानिएको छ ।
हाइब्रिड बीउ उत्पादनमा सुधार
नेपालमा प्रत्येक वर्ष २ हजार मेट्रिक टन मकैको बीउ भारतबाट आयत हुने गरेको राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रम रामपुरको तथ्यांकमा उल्लेख छ । गत हिउँदमा ३०.५ टन हाइब्रिड मकैको बीउ उत्पादन भएको राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रम रामपुरका प्रमुख डा. केशवबाबु कोइरालाले बताए । “यस वर्ष १ सय ८० टन हाइब्रिड मकैको बीउ उत्पादन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ” कोइरालाले भने, “पछिल्लो समय हाइब्रिड मकैको बीउ उत्पादनमा शुभसंकेत देखिएको छ ।”
नेपालमा ९ लाख ५६ हजार हेक्टर जमिनमा मकै खेती हुँदै आएको अनुसन्धान कार्यक्रम रामपुरले जनाएको छ । यस वर्ष झापाको महारानीझोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले नमुना एकीकृत खेती, दवाडी एग्रो इन्टरप्राइजेज चितवनले, लुम्बिनी सीडउत्पादन कम्पनी, गोर्खा सीड कम्पनी, प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना दाङ, गेट नेपाल बाँके, नासिक सीड कम्पनी दाङ, युनिक सीड कम्पनी धनगढी, पञ्चशक्ति सीड कम्पनी धनगढी, गोर्खा सहकारीलगायतले हाइब्रिड मकैको बीउ लगाएको मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रम रामपुरका प्रमुख कोइरालाले बताए । हाइब्रिड मकै तर्फ नै कृषकको आर्कषण बढ्दै गएकाले यसैलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भए पनि यस विषयमा सरकार गम्भिर बन्न नसकेको डा. कोइरालाको भनाई छ । सरकारले लगानी वृद्धि, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन, किसानलाई नेपाली हाइब्रिड जातको मकैको बीउ प्रयोग गर्न प्रोत्साहन, आवश्यक अनुदानको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सके हाइब्रिड मकै उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्ने उनी बताउँछन् । “कुखुराको दानाका लागि नेपालमा वार्षिक ५ लाख टन मकै आवश्यक हुन्छ, कोइरालाले भने, “नेपालको उत्पादनले २५ प्रतिशत मात्र थेग्छ बाँकी ७५ प्रतिशत मकै भारतबाट आयत हुन्छ ।”
कसरी सञ्चालन हुँदै छ जोन ?
पछिल्लो समय जिल्लामा हिँउदे मकैको क्षेत्र विस्तारको कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको झापा जिल्ला जोन परियोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख रवीन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए । जोनले हिउँदे मकैको क्षेत्र विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको भएकाले यो चुनौतीपूर्ण रहेको सुवेदीले बताए । “धान सुपरजोन, मकै जोन, रबर जोन, सुपारी जोनका लागि संघीय सरकारबाट ६ करोड बजेट विनियोजन भएको छ” प्रमुख सुवेदीले भने, “मकैको हकमा चक्लाबन्दी खेती विस्तार, सरकारले सूचीकृत गरेको बीउमा अनुदान, कृषकलाई तालिम, यान्त्रिकीकरण खरिदलगायत काम गरिरहेका छौँ ।” झापामा प्रत्येक वर्ष २ लाख ८ हजार मेट्रिक टन मकै उत्पादन हुँदै आएको कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ । झापामा बसन्ते, हिउँदे र बर्खे मकै उत्पादन हुन्छ ।
#झापा गाउँपालिका –१